fanontaniana Fanontaniana amin'ny tenim-pirenena 737?
1 taona 10 volana lasa izay #893 by iamcanadian2
1 taona 9 volana lasa izay - 1 taona 9 volana lasa izay #943 by DRCW
Miarahaba, Raha manana fiaramanidina hafa ianao amin'ny teny Anglisy dia azonao atao ny mamindra ireny feo ireny ary manolo ny entana ao amin'ny entana 737. Mba hanaovana izany, sokafy ny ordinatera feo eo amin'ny fiaramanidina, horaketina mandra-pahitanao ireo audiophiles roa. . Mariho ny anarana, ary tsindrio indroa eo amin'ny tsirairay mba hahafahanao mandre sy manamarina azy ireo. Mankanesa any amin'ny fiaramanidina izay misy feo tianao ao amin'ny kitapo 737. Rehefa mahita ireo feo roa ao amin'ny fiaramanidina tianao te halefa ianao, dia afeno ary apetaho amin'ny horonan-tsary ireo horonam-peo ireo. . Mety marika toy izao izy ireo:
Cabin_Alert or Fehin-tseza ary matetika ny Tsy azo ifohana sigara dia niakatra ihany koa. Ataovy azo antoka aloha ny anaran'ny rakitra feo lalao ireo avy amin'ny entana 737, raha tsy izany, tsotra fotsiny tsindrio havanana ny momba anao Nataonao eo amin'ny biraonao , ary Hanova anarana ireo antontan-taratasy ho azy ireo lalao. Ampidiro ao amin'ny ordinateran'ny ordinatera 737 ny rakitra tsirairay, ary omena safidy ianao Miala ary manolo azy ireo. Tokony hanana feo marina izay tianao ianao rehefa hitanao ny switch.
Last edit: 1 taona 9 volana lasa izay DRCW.